Fanadihadiana horonan-tsary momba ny Samsung Galaxy S6 Edge | Androidsis
Alfonso de Frutos | | MWC, hevitra, Samsung
Mandritra ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 Edge nanana fotoana izahay andrana ny finday avo lenta voalohany amin'ny tontonana roa miolaka. Fitaovana misy fiasa manandratra azy eo an-tampon'ny sehatra ary miaraka amina endrika mahaliana sy mamaky tany.
Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia mitentina 150 euro mihoatra ny kinova mahazatra ka mendrika ve ny mandoa bebe kokoa raha manana an'ity terminal ity? Mba hamaliana an'ity fanontaniana ity dia mitondra anao izahay a Famerenana horonantsary Samsung Galaxy S6 Edge izay hamerenantsika ireo fiasa sy fiasa miavaka indrindra amin'ity smartphone ity.
1 Fifanarahana TouchWiz tsotra sy tsotra kokoa
2 Tena lafiny miolakolaka
Fifanarahana TouchWiz tsotra sy tsotra kokoa
Mpampiasa maro no nitaraina momba ny lagy ateraky ny interface custom izay ampidirin'ny mpanamboatra Koreana amin'ny fitaovany rehetra. Tamin'ny fahatongavan'i Galaxy S6 Edge, Samsung dia nisafidy a manatsotra ny sosona TouchWiz anao.
Araka ny ahafahanao manamarina ny mpanamboatra Roa amin'ireo fampiharana azy ihany no nampidiriny, S Health sy S Voice, na dia amin'ny alalàn'ny magazay fampiharana Samsung aza dia afaka misintona izay rindranasa avy amin'ilay goavambe Koreana mety hahaliana antsika. Andininy izay ankasitrahan'ny maro amintsika.
Tena lafiny miolakolaka
Ny Samsung Galaxy S6 Edge dia tsy fanandramana toa ny Samsung Galaxy Note Edge. Antenaina fa amin'ny 10 aprily ho avy izao dia hahatratra ny ankamaroan'ny tsena izy ary, tsy toy ny mpikambana hafa ao amin'ny faritry ny Edge, ny fahafahany hanana tanteraka. Fa, Mendrika handoavana bebe kokoa ve ireo sisiny miolaka ireo? raha ny hevitro, tsy misy fisalasalana.
Hanombohana azy, hafa ny famolavolana, tsy manaraka ny tsipika nomarihin'ny ankamaroan'ny fitaovana izy ary mankasitraka izany fikasihan-tanana izany. Inona koa ny sisiny miolakolaka dia miasa tokoa noho izany dia mendrika ny manararaotra ireo mety arosony.
Araka ny efa hitanao tamin'ny famakafakana video an'ny Samsung Galaxy S6 Edge, tanana ankavanan'ny tanana ankavanana dia tsy hanana olana ianao hanararaotra ny fahafaha-manolotra aroson'ity fitaovana ity satria afaka misafidy ny lafiny tianao hampiasaina ianao.
Ny safidy hananana fifandraisana ankafiziana dimy, izay azontsika idirana amin'ny hetsika tsotra amin'ny ankihibenay dia tena ilaina tokoa. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra ka rehefa mahazo antso na fampandrenesana ny sisin'ny a loko isan-karazany arakaraka ny olona niantso anao.
Araka ny efa nampoizina dia hazava ihany koa ny sisiny voafantina rehefa mahazo fampandrenesana sy hafatra isika, tena ilaina tokoa hatramin'izay azonao atao ny manatrika ny Samsung Galaxy S6 Edge hanohy hahita ireo hafatra voarainao ianao.
Raha fintinina dia miatrika isika iray amin'ireo terminal mahaliana indrindra amin'ny taona. Samsung dia nahavita tsara ny asany ary niaina tamin'ny andrasana. Ho hitantsika raha noho ny Samsung Galaxy S6 Edge no ahafahany mamelombelona ny fizarana findainy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge, mamakafaka amin'ny horonan-tsary ny finday avo lenta voalohany misy efijery miolaka roa
Milaza aho fa hiaraka amin'ny efijery misy sisiny roa miolaka io. Satria jereo izay lazaiko, fa amin'ny sary rehetra dia efijery iray ihany no hitako fa tsy roa.
Sony Xperia M4 Aqua dia nanambara tamin'ny chip 64-bit Snapdragon 615 sy fakan-tsary 13MP